Anyị kpochapụwo na patent azu paaki flags, ihe ị na-enweta bụ a mgbanwe Nchikota ise ọkọlọtọ nhọrọ na otu usoro, Otu azu paaki na otu flagpole nwere ike dabara 5 ewu ewu shapes (feather, teardrop na rectangle, arch, paddle) na ahịa.
Wedata ngwa ahịa gị na ohere ngwaahịa, mana nhọrọ ndị ọzọ maka ndị ọrụ njedebe.
Ngwa: Mgbasa ozi ime ụlọ & n'èzí, ihe ngosi, ihe ngosi, mmemme, ngosi, nkwalite, agbamakwụkwọ, nnọkọ, ihe nkiri wdg.
Banner akpa azụ SFH na-eji otu akpa azu paaki deluxe, ogwe azụ azụ 3D-ụfụfụ nke nwere ihe mkpuchi ikuku na imewe ọwa ikuku, eriri na-agbanwe agbanwe, na-enye ahụ iru ala site na iji ahụmịhe; nwere akpa n'akụkụ na oghere zipper na-enyere gị aka ị drinkụ mmanya ma ọ bụ ụlọ ahịa akwụkwọ ozi, na-ahapụ onye na-eyi ya aka n'efu.
Knapsack nkwalite a gụnyere obere akpa maka nchekwa okporo osisi na ọkọlọtọ
Ọkọlọtọ dị mfe ịtọlite ​​​​, Jikọọ ọkọlọtọ anọ ahụ ọnụ site na thinnest ruo na oke, mgbe ahụ, ị ​​​​ga-enweta ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke dabara maka ọkọlọtọ feather (S) / teardrop flag (F) / Arch flag (C) / Paddle flag U). Were mpempe kacha dị gịrịgịrị ma tinye oghere dị n'elu nke ngalaba na-esote, gbagharịa okpu mkpọ ma ruo mgbe akpọchiri ya nke ọma, ya bụ maka ọkọlọtọ rectangle.
(1) Ngwaahịa patent, ọkọlọtọ ọhụrụ arịọnụ imewe. WZRODS zuru ụwa ọnụ hibere ya
(2) Ngwakọta na-agbanwe agbanwe nke nhọrọ ọkọlọtọ ise n'otu sistemu, dị mfe ịgbanwe ma jikwaa ngwaahịa gị iji zute usoro ngwa ngwa nke ndị ahịa, belata ngwa ahịa na ohere ngwaahịa gị.
(3) Ogwe azụ azụ 3D-ụfụfụ dị arọ kpụrụ akpụ nwere ihe nkuchi ma kwe ka imepụta ọwa ikuku na-eruba, na-enye ahụ iru ala site na iji ahụmịhe.
(4) Ụlọ zipper na akpa ndị ọzọ na-enye ohere ọzọ iji tọhapụ aka gị n'efu.
(5) Mkpọchi na eriri na-egbochi akpa azu ịdabere azụ na ifufe siri ike.
(6) Nko imewe na eriri maka karama mmiri
(7) Ihe Oxford na-eme ka akpa azu sie ike ma na-adigide ogologo oge.
Koodu ihe udi Ogo ọkọlọtọ GW (naanị ngwa ngwa)
Akpa azụ F Anya mmiri 103 x 52 cm 1.2KG
Akpa azụ S Nku 122 x 51 cm
Akpa azụ H Rektangulu 110 x 40 cm
Akpa azụ C Arch 152x51 cm
Akpa azụ U Paddle 105x50 cm
Nke gara aga: Akpa Deluxe - O
Osote: Akpa Deluxe - Abụọ - Ihu
Mgbasa ozi ọkọlọtọ akpa azụ
Lee Mgbasa Ozi Walker
Ọkọlọtọ n'akpa uwe nkwado
Mgbasa ozi ije
ọkọlọtọ akpa akpa na-eje ije
Akpa Deluxe - Bọọlụ
Ọkọlọtọ Udiri X nke Deluxe
Akpa Deluxe - Abụọ - Ihu